Wajiga Wanaagsan ee Gedo: Al-Anwar School
By ibrahim Aden shire September 07, 2017
Dugisga Hoose/dhexe iyo sare ee Al-anwar waa mid ka mid ah labada iskool ee horyaalka u hayo iskoolada Jubbaland, labaduna waxay ku yaalaan dagmada Garbahareey. Gaar ahaan Al-anwar ayaa door weyn ka cayaaray is badalka horumarineed ee dagmadu samaysay. Iskoolka oo hadda kow iyo toban jirsaday ayaan idinla wadaagi doonaa sabab-ti keentay in la furo, ciddi furtay, marxaladihi uu soo maray, halka uu maanta joogo iyo waliba hiigsigiisa mustaqbalka. Si aysan qormadu inoogu dheeraan waxaan u qaybin doonaa labo haduu Eebe idmo.
Sababihii loo furay
Qiimaha uu shay leeyahay waxay ku xiran tahay baahida markaas loo qabo. Koob biyo ah oo aad ku haysato dhul oomane ah wuxuu ka qiimo badan yahay fuusto biyo ah oo aad ku haysato magaalo biyo leh. Sidoo kale howlaha la qabto waxaa kala saraysiiyo baahida jirto iyo baryaha la joogo. Eebe waa isaga suuratul Xadiid ku yiri “ma sinna qofki sadaqo la baxay oo jihaaday ka hor intaan Makko la furan, iyagaa ka darajo badan kuwii wax la baxay oo diriray furashadi ka dib”.
Iyadoo ay maal wada bixiyeen naftoodana wada hureen ayay kala darajo sarreeyaan waayo waqtiga iyo baahida jirto ayaa kala duwanayd. Inti aan Makko la furan ka hor muslimiintu khataro badan ayaa ku furnaa dad badan ayaana shaki ka qabay inay guulaysan doonaan iyo in kale sidaa darteed kuwa waqtigaas islaamka galay, maalkoodi iyo dhiigoodiba bixiyay waxay qaateen khatar ku nasiibso ah laakiin mar haddii Makoo la furtay dadki waa u caddaatay inysan jirin meel lagu haro oo dadkaada dhinac ka raac ayay noqotay.
Sidaas ayay ku socotaa nolosha aadanahu; howl walba oo la qabto waqtiga cariiriga waa ay ka wanaag badan tahay midda la qabto xilliga maraq-fuudka waana sababta Al-anwar ka dhigtay mid ka qiimo badan boqol iskool oo gadashii la furay. Sidee ku dhacday?
Si aan u fahanno qiimaha uu lahaa furitaanki iskoolkaan aynu ka hadlayno marka hore waa inaan fahannaa xaaladdi ay ku jirtay dagmada Garbahareey waqtigi la hindisay iskoolka oo ahayd horaanti 2006-di.
Waqtigaan waxaa la dhihi waa waqtigii ugu xumaa ee abid soo maro Garbahaareey. Waxaa si ba’an ooga jiray faqri iyo dhaqaalo xumo ay sababeen dagaaladi jiffooyinka walaalaha ah dhex yeelay ee gobalka ka dhacay intii u dhaxaysay 1998-2005 kasoo ay hurisay Amxaaradu. Dagaaladaan ayaa waayadii ugu danbaysay yeeshay waji fool xun oo aan horay usoo marin taariikhda gobalka. Waxay dagmadu kasoo baxday waqti uusan ku noolaan Karin qof aan qori wadan. Waqti odayaasha da’da ah iyagoo qoryo jeenyo qaarsan ay habaynki furinta baryi jireen. Waqti saqiirro gowrac iyo magan lays la arkay.
Dagaaladaas foosha xun waxay keeneen barakac baahsan oo magaalada cidlo ka dhigay, dhaqaalo xumo gaajo iyo macaluul horseeday. Mid ka mid ah dadkii ku noolaa dagmada wayadaas ayaa gabay carabi ah ku cabiray xaalada dagmada waxa uuna yiri “وبلدة ليس بها أنيس* الا البعوضة والا الجوع” oo macnaheedu yahay “waa magaalo aad weheshanayso gaajo iyo kaneeco kaliya”.
Xagga wax barashada magaalada waxaa ka furnaa iskool hoose/dhexe oo ay taageerto hay’ad caalami ah. Laakiin wuxuu ahaa iskool aad looga niyad jabsanyhay dadkuna ku tuhmayeen tayyo xumo. Sidoo kale waxaa socday waxbarasho ka socotay masaajidka oo dad badan ay dhigan jireen. Laakiin iyaduna waxay ahayd mid dad waaweyn kaliya loogu talagalay oo caruurtu aysan la qabsan Karin. Dadka durrusta masaajidka qaadan jiray waxay dhammaantood ka yimaadeen miyiga Garbahaareey ama meelo ka fog marki laga reebo dhowr qof.
Arintaan waxay keentay in caruur badan saaqiddo. Wax barasho la’aanta ka sakow fassaad iyo fool xumo aan horay dhulka Gedo looga aqoon ayaa soo if baxay. Daroogo ilaa khamri gaartay Axmaaraduna sabab u ahayd ayaa bilowday. Dhalin badan oo sarqaan ah ayaa meelaha lagu arkay. Maalinba maalinta ka danbayso dhalan gaddoon iyo dhaqan xumo ayaa sii kordhaysay. Habaynki uu billaaban lahaa sanadki 2006-di ayaa waxaa la maqlay in dhalin yaro lab iyo dhadigba leh ay doonayaan inay qabtaan xaflad loogu dabaal dagayo sanadka. Dabaal dagga si looga dhigo mid xiiso badan waxaa la diyaarsaday muusiko iyo daroogu qaad, kaniin iyo khamri isugu jirto.
Dhacdadaan ayaa waa baryay ku noqtay wadaadi masaajidda casharada ka waday oo u haystay in dadku sidooda oo kale wada cibaadaysto. Waxaa soo baxay su’aalo badan oo aan horay la isu waydiin iyo dib loo eego dowrka culimadu ku yeelan karto sama bixinta dadka. Sidoo kale waxaa la is waydiiyay waxa uu noqon karo xalka ugu sahlan ee lagu soo afjari karo fassaadkaan faraha ka baxay.
Muddo dood iyo baaritaan iyo xaalad fahan ah ka dib, waxaa soo baxday in xalka ugu sahlan uu yahay in caruurta magaalada loo helo wax barasho nidaami ah oo mustaqbalkooda hagto sidaas ayaana lagu go’aamiyay in la furo iskool hoose/dhexe ee Al-anwar.
yaa furay iskoolka
Si loo hirgaliyo hadafkaan, habayn Sabti taariikhduna ay ahayd 1/5/2006 ayaa sheikh Xuseen Ibraahim Axmed-Nuur oo ahaa sheekha casharada ka waday magaalada waxaa uu uu isugu yeeray shan nin oo ardadiisa ka mid ahayd kuwaas oo kala ahaa: Axmed Maxamed Caafi, Cabdi-Nasir Maxamed Cilmi, Sheekh Khaalid Macalin Nuur, Saadaq Sheekh Daahir Cali-Ciye, iyo Maxamed Gaboobe Muuse (Baaqillaani).
Shirkaan ayaa ahaa mid sheekhu oogu talagalay in lagu gorfeeyo sidii lagu suura galin lahaa furintaanka iskoolka. In iskool la furo maahan mid fudud. Waa arin u baahan qarash badan oo lagu wado, guryo u diyaarsan in wax lagu barto, macalimiin aqoon u leh waxay dhigayaan iyo dad u diyaarsan inay wax bartaan ama ubadkooda wax baraan.
Waxaa xusid mudan in lixda nin ee shirka isugu timid si ay suura galiyaan iskool lagu badbaadiyo caruurta reer Garbahaareey, uusan ku jirin qof Garbahaareey ku dhashay. dhammaan raggaan waxay ahaayeen xertii magaalada u timid inay wax ku bartaan iyo sheekhoodi ay cilmiga ka qaadanayeen. Arintaan ayaa muujinayso abaalka aan la gudi Karin ee sheikh Xuseen ku leeyahay Garbahaareey iyo dadkeeda kaaso inta dareensan ay yartahay.
Labo bilood oo shaqo, wareer iyo soo jeed badan leh ka dib waxaa la furay iskoolka Al-Anwar 1/7/2006 iyadoo lagu billaabay 40 arday iyo 5 macalin. Waxaa qayb weyn ka qaatay suura galinta iskoolka qaar ka mid ah qurba joogta oo uu hormuud ka ahaa Sheekh xasan Maxamuud Garaad.
Waxaa lagama maarmaan ah inaan xusso in iskoolkaan uusan ahayn kii ugu horeeyay ee magaalada laga furo si loo xalliyo mushkiladihii aan kor kusoo xusay. Iskoolkaan bilo un ka hor waxaa la furay iskoolka Gogol oo isaguna qayb weyn ka noqday toosinta dhalinta dagmada ahna iskoolka tartarnka kala dhaxeeyo Al-anwar. Balse kala duwanaanshaha mabaadida ku salaysan ee magaalada ka jiray ayaa waxa uu keenay in Al-Anwar oo inta badan dagmada laga raacsanaa uu miisaan xoog badan ku yeesho horumarinta wax barashada Garbahareey.
La soco Qaybta xigto.